ဒီလိုဝေဒနာတွေကို ခံစားနေရပါသလား ဆေးဝါးအကူအညီမပါဘဲ ဖြေရှင်းကြည့်ပါ – Good Health Journal
(က) ခေါင်းကိုက်နေရင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို သောက်မယ့်အစား လက်မနဲ့လက်ညှိုးကြားက အသားဆိုင်နေရာကို နှိပ်ကြည့်ပါ။
ပုံမှာ ပြထားတဲ့နေရာကို ငါးမိနစ်ခန့်နှိပ်ပေးတာ ကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒ နာတွေ သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။
သွားကိုက်တာ၊ ပခုံးနာကျင်တာနဲ့ ကလေးမွေး ဖွားခါနီးနာကျင်တာတွေပါ သက်သာနိုင်ပါတယ်။
(ခ) ဘုံဘိုင်ခေါင်းက ကျဆင်းလာတဲ့ ရေအေးနဲ့ လက်ဆေးတာကြောင့်လည်း ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ သက်သာနိုင်ပါတယ်။
ရေအေးကြောင့် သွေးကြောကျုံ့သွားနိုင်ပြီး အာရုံကြောအပေါ် ဖိအားကျရောက်မှု လျော့ပါးသွားပါတယ်။ လက်က အာရုံကြောတွေက ဦးနှောက်နဲ့ ဆက်သွယ်မှု ရှိပါတယ်။
(ဂ) ခြေမကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ခြေမရဲ့ အပေါ်၊ ဘေးနဲ့ အောက်ခြေ နေရာ တွေမှာ Head Reflex ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာတွေကို နှိပ်ပေးလိုက်ရင် ခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းက တင်းမာမှု တွေ လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
♦ အလုပ် ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုကိုမှတ်မိချင်ရင် ညအိပ်ခါနီးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဦးနှောက်က ညအိပ်စဉ်အချိန်မှာ ရေတိုမှတ်ဉာဏ်က ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပစ် လိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စာမေးပွဲဖြေစရာ ဒါမှမဟုတ် အရေးတ ကြီးတင်ပြစရာကိစ္စရှိတဲ့နေ့တွေမှာ အိပ်ရာမဝင်ခင် စာ ဒါမှမဟုတ် တင်ပြရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်နွှေးပါ။
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ကို ရှူရင်လည်း ၇၅ % မှတ်ဉာဏ် ပိုမိုထက်သန်နိုင်ပါတယ်။
♥ ကြို့ထိုးတာ သက်သာအောင်
လက်ကို ဆန့်တန်းပြီး ဦးခေါင်းပေါ်သို့ မြှောက်ပါ။
လက်နဲ့ ရင်ခေါင်းကို ဆွဲဆန့်လိုက်တာကြောင့် ရင်ခေါင်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကို ကန့်ထားတဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ် ကြွက်သားအလိုအလျောက်ကျုံ့ဆန့်တာ ရပ်တန့် သွားနိုင်ပါတယ်။
♥ နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးသွားအောင်
စိုးရိမ်သောကကြောင့် နှလုံးတုန် ရင်ခုန်နိုင်ပါတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်း ပုံမှန်အနေအထားပြန်ရောက် လာအောင် နှာခေါင်းညှစ် ပါးစပ်ပိတ်ကာ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ပြီး အသက်ရှူထုတ်ပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်တာကြောင့် ရင်ခေါင်းအတွင်း ဖိအားများ လာပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့ အာရုံကြောက လှုံ့ဆော်မှုရှိသွားပြီး နှလုံးခုန်နှုန်း ပြန်နှေးသွားနိုင်ပါတယ်။
နှာခေါင်းသွေးယိုတာက နှာခေါင်းပေါက် နှစ်ခုကို ကန့်ထားတဲ့ အရိုးနုအရှေ့ဘက်က သွေးယို စီးတာကြောင့်ပါ။ သွေးယိုတာရပ်တန့်အောင် နှာ ခေါင်းပေါက်အောက်တည့်တည့်က အပေါ်သွားဖုံး နေရာကို ခပ်တင်းတင်းဖိထားလိုက်ပါ။ ဝါဂွမ်း ဒါမှမ ဟုတ် ပတ်တီးကိုအသုံးပြုပြီး ဖိအားပေးနိုင်ပါတယ်။
♥ အရက်မူးတာကြောင့် ဒယီးဒယိုင်မဖြစ်အောင်
အရက်မူးနေတဲ့အချိန်မှာ လမ်းဖြောင့်ဖြောင့်မ လျှောက်နိုင်တော့ပါဘူး။
ခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းသိမ်းပေး နေတာက နားအတွင်းပိုင်းနဲ့ သူ့ထဲမှာရှိတဲ့အရည်ပါ။ ဒီအရည်က သွေးနဲ့ သိပ်သည်းဆတူညီပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောကြောင့် သွေးနဲ့ နားတွင်းက အ ရည်ကျဲသွားတဲ့အတွက် ဒယီးဒယိုင်ဖြစ်သွားတာပါ။
လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိဘဲ တည်ငြိမ်တဲ့ အရာဝထ္ထု တစ်ခုပေါ်ကို သင့်လက်တင်လိုက်ပါ။ လက်အာရုံ ကြောက ဦးနှောက်ကို အချက်ပြလိုက်တဲ့အတွက် ဦးနှောက်က သင့်အနေအထားကို ပြန်လည်သုံးသပ် ပေးတာကြောင့် အမူးပြေသွားနိုင်ပါတယ်။
♥ သွားကိုက်၊ သွားနာတာ သက်သာအောင်
လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကြားက V အသားဆိုင်နေ ရာကိုပဲ နှိပ်ပေးရပါမယ်။ ရေခဲအသုံးပြုနိုင်ရင် ပိုမို ကောင်းမွန်ပါတယ်။ လက်နဲ့မျက်နှာပေါ်က နာကျင် မှုအချက်ပြလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ပင်နိုင်တာကြောင့်ပါ။
ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်တာက ရင်ပူနာနဲ့ လေ ချဉ်တက်တာကို သက်သာစေပါတယ်။ ညာဘက် စောင်းအိပ်တဲ့အခါမှာ အစာအိမ်က အစာမျိုပြွန်ရဲ့ အပေါ်မှာ မြင့်တက်နေတာကြောင့် အစာအိမ်ထဲက အက်စစ်တွေ အစာမျိုပြွန်ထဲ အလွယ်တကူ ဝင် ရောက်နိုင်တာကြောင့် လေချဉ်တက်တာ ဒါမှမ ဟုတ် စားချဥ့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ကို စောင်းအိပ်တဲ့အခါမှာ အစာအိမ်က အောက်ကို ရောက်သွားတဲ့အတွက် သူ့ထဲကအက်စစ်တွေက အစာမျိုပြွန်ဆီရောက်ဖို့ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကို ဆန့်ကျင် ပြီး ပြုလုပ်ရမှာမို့ ခက်ခဲသွားပါတယ်။
♥ နှာပိတ်တာ သက်သာအောင်
မျက်နှာအရိုးကို ရှေ့နောက်တွန်းပေးနိုင်ရင် နှာပိတ်တာသက်သာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ အရင်ဆုံး သင့်လျှာနဲ့ အာ ခေါင်မိုးကို တွန်းလိုက်ပါ။
ပြီးရင် မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားနေရာကို သင့်လက် ချောင်းနဲ့ ဖိလိုက်ပါ။
ဒီနှစ်မျိုးကို တစ်လှည့်စီပြုလုပ်ပါ။ စက္ကန့် ၂၀ အတွင်း နှာပိတ်တာ သက်သာနိုင်ပါတယ်။
♥ သွေးဖောက်တဲ့အခါ နာကျင်မှု မရှိအောင်
သွေးဖောက်ခံရဖို့ ဆေးထိုးအပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီး နာကျင်မှာ ကြောက်နေရင် ချောင်းဆိုးလိုက်ပါ။ ချောင်းဆိုးလိုက်တာကြောင့် ရင်ဘတ်နဲ့ အာရုံကြောမ ပြွန်ကြီးအတွင်း ဖိအားသက်ရောက်မှု များပြားလာ တဲ့အတွက် နာကျင်မှုကို အချက်ပြတဲ့လမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပါတယ်။ သွေးလှူဒါန်းဖို့ သွေး ဖောက်ခံရရင်လည်း နာကျင်မှုမရှိအောင် ဒီနည်းကို အသုံးပြုပါ။
လည်ချောင်းယားနေရင် သင့်နားရွက်ကို ကုတ်ခြစ်လိုက်ပါ။ နားရဲ့အာရုံကြောကို လှုံ့ဆော်ပေးလိုက်တာကြောင့် လည်ချောင်းကြွက်သားတွေကReflex ကြောင့် ကျုံ့ဆန့်ဖြစ်လာပြီး ယားယံတာ သက်သာနိုင်ပါတယ်။
♥ လက်ကျဉ်တာ သက်သာအောင်
လက်ကျဉ်ရတာက လည်ပင်းအာရုံ ကြောတွေ ကို ဖိမိထားခံရတာကြောင့်ပါ။လည်ပင်းကြွက်သား တွေ ပျော့ပျောင်းနေရင် လက်ပေါ်ကျရောက်တဲ့ ဖိ အားတွေ လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
♥ ပျို့ချင်တာ သက်သာအောင် ဘယ်ဘက်လက်သီးကို ဆုပ်ပါ
လက်ဖဝါးမှာရှိနေတဲ့ Pressure Pointကို ဖိအားပေးတာကြောင့် ပျို့တာ သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ပျို့ချင်လာရင် လက်မကို အထဲထည့်ပြီး လက်သီးဆုပ် လိုက်ပါ။
♥ ဆီးသွားချင်စိတ်ကို အောင့်ထားနိုင်အောင်
ဆီးအရမ်းသွားချင်နေပေမယ့် အိမ်သာရှိ ရာနေရာရောက်ဖို့ အချိန်အတော်လိုနေသေး တယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။
ဆီးသွားချင်တာကိုအာရုံလွှဲဖို့ တခြားအ ကြောင်းအရာတစ်ခုကို တွေးနေကြည့်ပါ။ သင့်ဦး နှောက်က အဲဒီအကြောင်းအရာကြောင့် အလုပ်ရှုပ် သွားတဲ့အတွက် အိမ်သာရှိရာနေရာကိုရောက် တဲ့အထိ သင် ဆီး အောင့် ထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
♥ ပြေးတဲ့အခါ ဝမ်းဗိုက်မနာကျင် အောင်
လူအများစုက ပြေးတဲ့အခါမှာ ညာ ဘက် ဝမ်းဗိုက်နေရာက နာကျင်လေ့ရှိ တတ်ကြပါတယ်။ ညာဘက်ခြမ်းနံရိုးအုံ အောက်က အသည်းကြောင့် ဗိုက်အောင့် တာပါ။
ပြေးရင်း ညာဘက်ခြေထောက်က မြေကြီးနဲ့ထိတဲ့အချိန်မှာ အသက်ရှူထုတ် လိုက်တာကြောင့် အသည်းကိုအောက်ဘက် တွန်းချလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီး ပြန်ကန်အ ထွက်မှာ အသက်ရှူကြွက်သား (ဝမ်းဗိုက် ကန့်လန့်ဖြတ်ကြွက်သား) ကိုထိမိတဲ့အတွက် ဗိုက်အောင့်တာပါ။
ပြေးတဲ့အခါမှာ ဗိုက်မနာအောင် အသက်ရှူထုတ်ရင် ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကမြေကြီးနဲ့ထိအောင် လေ့ကျင့်လိုက်ပါ။
– 12 tricks that will help you control your body.
– 15 health tricks to teach your body.
Categories:	Article, Health Tips	/ by Good Health Admin June 30, 2020